Loza mitatao amin’ny fitsaboana :: Miparitaka ireo mpanotra sandoka • AoRaha
Teto Antananarivo no efa nahitana olon-tsotra nisandoka ho mpitsabo amin’ny alalan’ny otra, araka ny nampahafantarin’ ny Federasiona natokana ho an’ireo manam-pahazaina amin’ny fanorana eto Madagasikara na ny FPRM. Ireo olona milaza ho mahay manotra no tena manao ny fisolokiana nefa samy hafa ny asan’izy ireo.
Manimba ny asan’ireo mpitsabo amin’ny alalan’ny otra ny fisian’ireo mpisandoka . Mety hitarika voka-dratsy amin’ny marary ihany koa satria misy teknika nianarana manokana ny fanorana (kinésithérapie). Milaza ho tsy afa-manoatra ireo mpitsabo ireo noho ny sakana tsy ahafahana manenjika azy ireo.
“Tsy mbola afaka mitoroka sy mandray fepetra manoloana ny fisolokiana izahay satria tsy mbola mitsangana ny vondron’ny mpitsabo amin’ny alalan’ny otra eto Madagasikara”, hoy Raharivony Augustin, filohan’ny FPRM nandritra ny fihaonambe nataon’izy ireo, teny Tsimbazaza omaly.
Fantatra fa mbola tsy misy io vondrona io ankehitriny na efa tamin’ny taona 2016 aza no efa nisy fikambanana iray hafa nikasa ny hanorina azy. Mety ho tombony ho an’ireo mpisehatra, toy ny fahazoana fankatoavana iraisam-pirenena, kosa ny fitsanganany, araka ny fanampim-panazavana.
“Hahafahanay miaro ny asanay sy ireo mpisehatra ny fitsanganan’ny vondrona”, hoy hatrany Raharivony Augustin. Marihina fa mbola tsy ampy ireo olona misehatra amin’io fitsaboana io eto amintsika. Misy aza ny faritra no tsy mbola manana an’izany, toy ny any Atsimo Andrefana. Fantatra fa mbola enimpolo sy roanjato ihany ireo manam-pahaizana amin’ny fanetsiketsehana vatana raha sendra tra-doza na misy marary amin’ny vatana ireo eto amintsika.